Beach-Villa 4. - I-Airbnb
Wongaling Beach, Queensland, i-Australia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Todd
U-Todd Ungumbungazi ovelele
I-Beach-Villa 4. iyindawo ekahle kakhulu yokushaywa wumoya e-North Queensland. Ingenye yama-Bungalow yamahhala emihlanu enendawo yokubhukuda ehlanganyelwayo. Uzungezwe izingadi zasenkabazwe nokubukeka okuya e-Dunk Island nolwandle lwe-Coral, ngeke ube nokukhetha kodwa ukuphumula.
I-Beach-Villa 4. iklanywe ngobungcweti futhi yabonisa ukuphila okuvamile kwasogwini.
I-Bungalow inikeza ukugeleza okulula phakathi kwekhishi lesimanjemanje, indawo yokudlela kanye negumbi lokuphumula.
I-Beach-Villa 4 iyindawo ekahle kakhulu yokushaywa wumoya e-North Queensland. Ingenye yama-Bungalow yamahhala emihlanu enendawo yokubhukuda ehlanganyelwayo. Uzungezwe izingadi zasenkabazwe nokubukeka okuya e-Dunk Island nolwandle lwe-Coral, ngeke ube nokukhetha kodwa ukuphumula.
I-Beach-Villa 4 iklanywe ngobungcweti futhi yabonisa ukuphila okuvamile kwasogwini.
I-Bungalow inikeza ukugeleza okulula phakathi kwekhishi lesimanjemanje, indawo yokudlela kanye negumbi lokuphumula. Ikamelo lokulala eliyi-Master linombhede omkhulu onendlu eyakhiwe ngamapulangwe, elinelinye ikamelo lokulala elilala abantu ababili phansi kanye nemibhede elala umuntu oyedwa ku-loft yaphansi.
Bukela izingane echibini ku-veranda yangaphambili noma usebenzise ngokunenzuzo indawo yangasese ye-alfresco undercover ejabulela i-barbeque newayini noma amabili.
Amafasitela anomusa agcwalisa i-villa ngokukhanya kwemvelo okuningi futhi ahlinzeka ngokubukwa okuhle kwamaqabunga kuzo zonke izinhlangothi. Indawo eyengeziwe ye-Dunk Neziqhingi Zomndeni yenza kube okukhethekile kangaka.
Le villa iyindawo ekahle kakhulu yokuba abantu abashadile bavuselele amabhethri abo, noma indawo ekahle kakhulu yokuletha umndeni.
4.92 · 13 okushiwo abanye
Ngihlala eduze futhi ngingatholakala noma nini
UTodd Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Wongaling Beach namaphethelo